people Nepal » माओवादी केन्द्रको अप्ठेरो ! दुई सीटमा दश नेताको दावी माओवादी केन्द्रको अप्ठेरो ! दुई सीटमा दश नेताको दावी – people Nepal
माओवादी केन्द्रको अप्ठेरो ! दुई सीटमा दश नेताको दावी
Posted on April 14, 2018 by Purna Nanda Joshi
काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका केही समान हैसियतका नेताहरुका कारण एकीकृत पार्टीको स्थायी समितिको संख्यामै प्रश्न उठेको छ । एकीकृत पार्टीको स्थायी समिति ३३ सदस्यीय हुने भनेर सांगठनिक कार्यदलले टुंगो लगाएको छ । त्यो अवस्थामा माओवादीका समान हैसियतका नेताहरु अग्नि सापकोटा, पम्फा भूसाल, उर्मिला अर्याल, जनार्दन शर्मा, शक्ति वस्नेत, हितराज पाण्डे, मणि थापा, राम कार्की, गणेश साह, मातृका यादव, लेखराज भट्टलगायतका नेताहरुको हैसियत के हुने भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
३३ सदस्यीय स्थायी समिति बनेको अवस्थामा माओवादी केन्द्रबाट जम्माजम्मी ११ जना पर्नेछन् किनभने २२ जना एमालेका अहिले नै छन् । माओवादीका ११ जनामध्येमा पनि अहिले नै स्थायी समितिमा पर्नेहरुको सूचीमा माओवादीका पूर्व पदाधिकारी नै छन् । ती पूर्व पदाधिकारीमा उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, महासचिव रामबहादुर थापा वादल, वादलभन्दा पहिलेका महासचिव कृष्णबहादुर महरा, सचिवहरु टोपबहादुर रायमाझी, वर्षमान पुन, गिरिराजमणि पोखरेल कोषाध्यक्ष हरिबोल गजुरेल स्वतः स्थायी समितिमा पर्नेछन् । त्यसमध्ये महरा सभामुख भएकोले पार्टीको जिम्मेवारीमा रहने छैनन् । तर महराको कोटाबाट एकतामा आएका नेकपा संयुक्तका गणेश साहलाई समेटिने चर्चा छ ।
त्यसरी हेर्दा अध्यक्ष प्रचण्डसहित ९ जना समेटिनेछन् भने बा“की २ जनामा को को पर्ने भन्ने लडाई अहिले माओवादीमा छ । त्यही २ जनाको कोटामा अहिले १० जनामा माओवादी नेताहरु प्रतिस्पर्धामा छन् । त्यसमध्ये जनार्दन शर्मालाई केपी ओली र प्रचण्ड दुवैको साथ रहेकाले उनी स्थायी समितिमा पर्ने संभावना छ । बाँकी रहेको एक सीटमा प्रवक्ता र महिला भएको हैसियतमा पम्फा भूसालको नाम पनि चर्चामा छ । अरु ८ जना नेता पनि स्थायी समितिमा पर्नुपर्ने दावी गरिरहेका छन् । यही समस्याका कारण पनि प्रचण्ड बराबरी हैसियतमा पार्टी एकताको नारा दिइरहेको माओवादी केन्द्रका नेताहरुको भनाइ छ ।